Mhuri Game Novelties Inowanikwa kubva kuPegasus Mitambo - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 29, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, crowdfunding, nhau
NeKliniki Rush, Sobek - Iyo Duel uye Living Sango, mitambo mitsva yemhuri mitatu ichangobva kuburitswa nePegasus Mitambo. Kubva kune manejimendi echipatara kutengeserana muEgypt yekare kusvika kumidzimu yechisikigo musango risinganzwisisike, vatambi vanogona kuwana maawa akawanda ekunakidzwa nezvinhu zvitsva.
Muparidzi Pegasus Spiele akaunza mitambo mitatu mitsva yebhodhi pamusika yemhuri - madingindira akasiyana zvachose. Kubva pane zvisinganzwisisike kusvika pakushushikana muhupenyu hwemazuva ese hwechipatara kusvika pakutengesa muEgypt yekare, kune maruva ane mavara emashure.
Chipatara, Sango uye Ekare Egypt
Sango risinganzwisisike, tsime rekudzikama uye rugare, rinotyisidzirwa nemirazvo inoparadza yeOnibi. MuLiving Forest, vatambi vaviri kusvika vana vane makore gumi zvichikwira vanoda kuita semidzimu yezvisikwa kuchengetedza sango uye kumisa kuOnibi nekudzima moto, kudyara miti inodzivirira kana kumutsa Sanki, muchengeti wesango. Vanowana rubatsiro kubva kumhuka dzesango dzakaita setsindi, mbira nemazizi. Living Sango mutambo wemhuri wakakwira une push-yako-mhanza michina uye mifananidzo yemuchadenga. Kunyangwe vatambi vese vachiedza kuchengetedza sango, pakupedzisira mumwe chete anogona kukunda.
Mutambo uyu unopera kana munhu mumwechete akadyara miti gumi nembiri yakasiyana, akadzima mirazvo gumi nembiri, kana kuunganidza maruva anoyera gumi nemaviri, nokudaro achimutsa Sanki. Mutambo waAske Christiansen wakahwina mutambo weFrance wegore, Jeu de l'Année, muchikamu cheInitié (mutambo wemukati/nyanzvi) muna Kukadzi. Muzvitoro zvine nyanzvi, vatengi vanogashira makadhi maviri ekusimudzira Onibi & Sanki mahara nekutenga kwavo. Ichi chinopihwa chinoshanda kana stock ichiripo. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve gameplay yeLiving Forest, unogona kuwana dhizaini yedhizaini paPegasus Mitambo Blog uye vhidhiyo yetiyi paPegasus Mitambo YouTube chiteshi.
Kufanana neyakatangira yakazvimiririra Kitchen Rush, Clinic Rush mutambo wekubatana chaiwo-nguva. Panzvimbo pekumhanyisa resitorendi, mutambi mumwe kusvika vana kubva pazera regumi anomhanyisa chipatara uye anorapa varwere. Vashandi vanomiririrwa zvakare nemagirazi emaawa anoiswa panzvimbo dzekuita. Vatambi vanorekodha data remurwere, kuita bvunzo, kuongorora huwandu hweropa, kuona mabhakitiriya tsika kana kuzadza chitoro chemishonga - zviri nani nekukurumidza uye nenzira kwayo, hongu, zvikasadaro vezvenhau vachaziva nezvazvo uye mukurumbira wechipatara uchadzikira. Mushandirapamwe wezvikamu zvakawanda unosuma mitemo yemutambo nemunyori vatatu Anthony Howgego, Konstantinos Kokkinis naDávid Turczi. Mamwe matambudziko uye mana mazinga ekuomerwa anoda zvese kubva kuvatambi. Vaya vanofarira vanogona kuziva zvakawanda nezve mutambo weCliniki Rush muvhidhiyo yetiyeri.
MuSobek - The Duel, vatambi vaviri vane makore gumi zvichikwira vanopinda mumabasa evatengesi muEgypt yekare. Musika wamuka mumumvuri wenzvimbo yekuvakwa kweTemberi yeSobek, uye masangano ekutengeserana anoona mukana wavo wekupfuma. Kana munhu akatora zvinhu kubva kumusika, ivo zvakare vanogadzirisa ankh uye nekudaro vanoona kuti ndezvipi zvinhu zvave kuwanikwa kune rimwe divi.
Nerubatsiro rwevanobatika vanobatsira kune vane simba hunhu uye chiokomuhomwe panguva chaiyo, zvakakosha seti dzinofanirwa kuunganidzwa uye kutengeswa nepurofiti. Ani nani anounganidza mapoinzi akawanda ekukunda pamberi pemumwe wevatambi haachakwanisa kuita chero zviito anohwina uyu mutambo wehungwaru hwekuunganidza nevanyori Bruno Cathala naSébastien Pauchon.
Pegasus Mitambo 51231G Mitambo Yebhodhi * 45,99 EUR tenga
Kare Kingdom Builder Empire Edition: Humambo huchawedzera hukuru kune yegore
Inotevera Trivia Murder Party 2 inopedza Jackbox Party Starter
Cyberpunk 2077: Runyerekupe nezve "Samurai Edition" itsva
Eiyuden Chronicle: Mazana Magamba ndeimwe yemitambo yakabudirira yeKickstarter vhidhiyo
Nintendo: Game & Watch: Super Mario Bros. Edition ikozvino muzvitoro
RPG dhiri yakakosha mamirioni: Hasbro anoda kutenga D&D Beyond